ကမ္ဘာကြီး ကို ကပ် ရောဂါကြီး မှ ကယ်တင်နိုင် ဖို့ လက် တစ်ကမ်း အလို – Let Pan Daily
ကမ္ဘာကြီးကို ကပ် ရောဂါကြီး မှ ကယ်တင်နိုင် ဖို့ လက် တစ်ကမ်း အလို
လန်ဒန် အခြေစိုက် ဆေးထုတ် လုပ်ရေး AstraZeneca ဟာလည်းပဲ Covid-19 အတွက် စမ်းသပ်ဆေးဝါးအောင်မြင်ပါက ကုသဆေး ၁ ဘီလီယံကို ယခုနှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန်လာပြီး သူတို့ရဲ့ စမ်းသပ်ဆေးဝါးအဖြေဟာလည်း မကြာမီအချိန်အတွင်း ရရှိလာတော့မယ် လို့ မေလ၂၁ ရက်နေ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Oxford university နဲ့ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်တဲ့ ယခုစမ်းသပ်မှုရလဒ်ကောင်းပါက အနည်းဆုံး ကူသဆေး ၄၀၀ မီလီယံလောက်ကို မကြာမီ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အောက်တိုဘာလမှာ ရ ရှိနိုင်မယ် လို့ခန့်မှန်း ရတဲ့ ကုသဆေးတွေထဲက ကုသဆေး ၃၀၀ မီလီယံကို အမေရိကန်က ကြိုတင်မှာယူထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
The AstraZeneca Plc logo sits on an building at the company’s facilities in Sodertalje, Sweden, on Thursday, April 11, 2019. AstraZeneca raised its annual sales forecast, helped by demand for the U.K. drugmaker’s roster of new cancer drugs. Photographer: Mikael Sjoberg/Bloomberg
AstraZeneca ဆေးထုတ်လုပ်ရေးက သူတို့ရဲ့ကုသဆေး ဟာ အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာ အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပေမယ့် ယခုထွက်ရှိလာမယ့်စမ်းသပ် အဖြေပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကာ ထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အခြားစမ်းသပ်မှုတွေကို နိုင်ငံပေါင်း များစွာမှာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးအပါအဝင် ဆေးပညာဖွံ့ဖြိုးပီးနိုင်ငံတွေက ကုသဆေးထုတ်လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်း၁၀၀ ကျော်ကို အပူတပြင်း ကြိုးစားနေကြပေမယ့် လတ်တဆုတ်စာ ကုသဆေး နည်းလမ်းများကိုသာ လူသားနဲ့စမ်းသပ်နိုင်သေး တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားဝင်ကုသဆေးရရှိဖို့ ၁၈ လလောက်အချိန်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
AstraZeneca ဆေးထုတ်လုပ်ရေး ကို အမေရိကန်က ၁ ဘီလီယံထောက်ပံ့ပေးထားပြီး တိကျပြီး ပျောက်ကင်းမှုနှုန်းသေချာတဲ့ ဆေးဝါး အတွက် လူသုံးသောင်းလောက်မှာ စမ်းသပ်ရအုံးမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခြားဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့Pfizer Inc, Johnson & Johnson နဲ့ Sanofi တို့ လည်းပဲ ကုသဆေးအတွက်အသီးသီးကြိုးစားနေကြတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။အမေရိကန်အခြေစိုက် Inovio Pharmaceuticals ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကြီးကတော့ သူတို့ရဲ့စမ်းသပ်ဆေးဝါးဟာ ပူး နဲ့ ကြွက်တွေရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို Covid-19 မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေး တယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။
ကမ်ဘာကွီးကို ကပျ ရောဂါကွီး မှ ကယျတငျနိုငျ ဖို့ လကျ တဈကမျး အလို
လနျဒနျ အခွစေိုကျ ဆေးထုတျ လုပျရေး AstraZeneca ဟာလညျးပဲ Covid-19 အတှကျ စမျးသပျဆေးဝါးအောငျမွငျပါက ကုသဆေး ၁ ဘီလီယံကို ယခုနှဈအတှငျးထုတျလုပျပေးသှားမယျလို့ ထုတျပွနျလာပွီး သူတို့ရဲ့ စမျးသပျဆေးဝါးအဖွဟောလညျး မကွာမီအခြိနျအတှငျး ရရှိလာတော့မယျ လို့ မလေ၂၁ ရကျနေ့ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပါတယျ။Oxford university နဲ့ တှဲဖကျလုပျဆောငျတဲ့ ယခုစမျးသပျမှုရလဒျကောငျးပါက အနညျးဆုံး ကူသဆေး ၄၀၀ မီလီယံလောကျကို မကွာမီ ထုတျလုပျပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ အောကျတိုဘာလမှာ ရ ရှိနိုငျမယျ လို့ခနျ့မှနျး ရတဲ့ ကုသဆေးတှထေဲက ကုသဆေး ၃၀၀ မီလီယံကို အမရေိကနျက ကွိုတငျမှာယူထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
AstraZeneca ဆေးထုတျလုပျရေးက သူတို့ရဲ့ကုသဆေး ဟာ အစောပိုငျးစမျးသပျမှုတှမှော အောငျမွငျမှုမရှိခဲ့ပမေယျ့ ယခုထှကျရှိလာမယျ့စမျးသပျ အဖွပေျေါမူတညျပွီး ဆေးဝါးထုတျလုပျဖို့ ကွိုးစားသှားမှာဖွဈကာ ထုတျလုပျနစေဉျအတှငျး အခွားစမျးသပျမှုတှကေို နိုငျငံပေါငျး မြားစှာမှာ ပွုလုပျသှားမယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးအပါအဝငျ ဆေးပညာဖှံ့ဖွိုးပီးနိုငျငံတှကေ ကုသဆေးထုတျလုပျဖို့ နညျးလမျးပေါငျး၁၀၀ ကြျောကို အပူတပွငျး ကွိုးစားနကွေပမေယျ့ လတျတဆုတျစာ ကုသဆေး နညျးလမျးမြားကိုသာ လူသားနဲ့စမျးသပျနိုငျသေး တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တရားဝငျကုသဆေးရရှိဖို့ ၁၈ လလောကျအခြိနျပေးရလိမျ့မယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ခနျ့မှနျးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
AstraZeneca ဆေးထုတျလုပျရေး ကို အမရေိကနျက ၁ ဘီလီယံထောကျပံ့ပေးထားပွီး တိကပြွီး ပြောကျကငျးမှုနှုနျးသခြောတဲ့ ဆေးဝါး အတှကျ လူသုံးသောငျးလောကျမှာ စမျးသပျရအုံးမှာလညျးဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ အခွားဆေးဝါးထုတျလုပျရေး လုပျငနျးကွီးတှဖွေဈတဲ့Pfizer Inc, Johnson & Johnson နဲ့ Sanofi တို့ လညျးပဲ ကုသဆေးအတှကျအသီးသီးကွိုးစားနကွေတယျလို့ သတငျးတှထှေကျနပေါတယျ။အမရေိကနျအခွစေိုကျ Inovio Pharmaceuticals ဆေးဝါးထုတျလုပျရေးကွီးကတော့ သူတို့ရဲ့စမျးသပျဆေးဝါးဟာ ပူး နဲ့ ကွှကျတှရေဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားကို Covid-19 မဝငျရောကျနိုငျအောငျ ကာကှယျပေး တယျလို့ ဆိုလာပါတယျ။